Famindrana tamin’ny fomba ofisialy ireo fiara enina tsy mataho-dalana, ao anatin’ny fandaharan’asa iarahan’ny Governemanta Malagasy sy ny UNICEF
UNICEF Logo Madagasikara
10 Septambra 2020
Galaxy, Andraharo 16 JONA 2020 – Fiara tsy mataho-dalana miisa enina no nafindra tanteraka amin'ny Minisiteran'ny Rano, Fanadiovana sy Fidiovana avy amin’ny Sampan-draharahan'ny Firenena Mikambana ho an'ny ankizy (UNICEF). Tafiditra ao anatin’ny fiaraha-miasa eo amin’ny governemanta Malagasy sy ny Sampan-draharahan'ny Firenena Mikambana ho an'ny ankizy (UNICEF) izany famindrana izany. Ireo fiara ireo dia ho ampiasaina amin’ny fanatanterahana ny fandaharan’asa iarahana eo amin’ny sehatry ny rano, fanadiovana sy fidiovana ao anatin’ireto faritra ireto : Boeny, Atsimo Andrefana, Atsimo Atsinanana, Androy ary Anosy.
Ny programa iraisana any amin'ireo faritra dimy ireo dia mikendry olona maherin'ny 110 000 mba hahazoan’izy ireo rano fisotro madio, ary olona maherin'ny 1 tapitrisa ihany koa eo amin’ny lafin’ny fanadiovana sy fidiovana.
Ny lanonana anio izay tanterahina eny Andraharo dia mifanojo amin'ny Andron'ny Ankizy Afrikana izay ankalazaina ny16 Jona. « Manerana ny kaontinanta afrikanina, ary indrindra ny eto Madagasikara, ny fahazoana rano fisotro madio sy ny lafin’ny fanadiovana dia mbola fanamby lehibe ho an’ny zon'ny ankizy. Misy fiantraikany manokana amin'ny fiainana andavanandron'ny ankizy io toe-javatra io. Manantena izahay fa ity fanohanana ity dia afaka hanatsara ireo drafitr’asa mba hitondrana fahamendrehana amin'ny fiainan'ny besinimaro amin’ny ankapobeny eo amin'ny resaka rano, fanadiovana sy fidiovana », hoy ny fanazavan'i Michel Saint-Lot, solontenan'ny UNICEF eto Madagascar.
« Ny taona 2020 dia manamarika ny fandraisan’andraikitra tena lehibe avy amin'ny Fanjakana mba entina manasongadina ny sehatry ny rano, fanadiovana sy fidiovana, amin'ny alàlan'ny fametrahana ity ministera ity. Ny fanatanterahana ity tetikasa lehibe ity izay mikasika ny fanatsarana ny fahazoana rano fisotro madio, fanadiovana ary fidiovana eto Madagasikara dia mitaky fandrindrana ireo hetsika sy fiaraha-miasa amin'ireo mpiara-miombon'antoka, toy izay efa nasehon'ny UNICEF hatrizay. Ity fanampiana ity, amin’ny alalàn’ny fanomezana ireo fiara tsy mataho-dalana ireo, dia mitranga amin’ny fotoana tena mahamety azy tokoa, indrindra amin'izao vanim-potoanan’ny valan’aretina izao izay tena manamarika bebe kokoa ny maha-zava-dehibe ny rano, ny fanadiovana ary ny fidiovana. Misaotra betsaka an'ny UNICEF izahay noho io fanampiana io izay hitondra anjara biriky lehibe amin'ny fanatanterahana ny iraka ampanaovina anay, » araka ny nambaran’i Ramatoa Minisitra Voahary Rakotovelomanantsoa.
Amin'izao fotoanan'ny valan’aretina izao, ny fahazoana fidiovana dia mbola tena manan-danja tokoa amin’ny ankizy mba hiarovana azy ireo sy hampianarana ihany koa ireo fihetsika sakana. Ho fiatrehana ny COVID19, ny UNICEF dia manohana ny Minisiteran'ny Rano, Fanadiovana sy Fidiovana; ka olona maherin'ny 2 tapitrisa no kendrena amin’ireo hetsika fisorohana sy fiatrehana an’izany manerana an'i Madagasikara.
Tompon'andraikitry ny serasera
Sampana Serasera sy haino aman-jery
Miasa amin'ny toerana sarotra indrindra eto ambonin’ny tany ny UNICEF mba hanatonana ireo ankizy sy tanora marefo indrindra - ary miaro ny zon'ny ankizy rehetra manerana izao tontolo izao.
Araho koa ny kaonty @UNICEFMada amin'ny Twitter, Facebook et Instagram
Fiatrehana sy fiarenana manoloana ny loza
Mpanentana eny amin’ny fiarahamonina, manohana ny vaksiny
Manohy manatanteraka ny andraikitry mpanentana eny amin'ny fiaraha-monina mandritry ny COVID-19 mba hamporisihana ny fianakaviana hanao vaksiny ny zaza
Vakio ny tantarany
24 Novambra 2020
Ny tsy fahazoana fanasan- tanana amin'ny savony dia mahatonga olona an-tapitrisany maro atahorana ho voan'ny COVID-19 sy areti-mifindra hafa
Fanombohana amin’ny fomba ofisialy ny fampiasana fitaovam-pibeazana momba ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy
Andro maneran-tany ho an'ny ankizy 2020
"Moving mountains" dia ahafahan'ny ankizy miakatra an-tsehatra sy maneho ny heviny, ary mampahatsiahy ny zon'izy kosa ny "Going blue"